Thwebula Adguard 7.3.3048 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Adguard
Amazwana ku Adguard
Adguard software ehlobene
I-Cookie Monster – Imenenja yamakhukhi yeziphequluli ezidumile. Isoftware ivumela ukudala uhlu lwamakheki ukuvimbela ukususwa kwabo.
Isofthiwe ukhonza ukusebenzisa imiphumela video, stereoscopic 3D ihluzo kanye netintfo animated phezu kwesithombe kusuka webcam.
Isofthiwe for the zokuxhumana ngezwi nabangani kanye nabanye abasebenzisi kunoma iyiphi ibanga. Futhi isofthiwe kwenza ukudala iziteshi zakho siqu izwi.
I-Camtasia Studio – isoftware yokuqopha izehlakalo ezenzeka esibukweni sekhompyutha yakho. Futhi, isoftware ivumela ukwengeza imiphumela ehlukahlukene nemisindo kumavidiyo.